Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer
LB waxay soo bandhigeysaa sheekada Full Story of Legend Football waxaa sida ugu wanaagsan loo yaqaan Nickname; 'Don Don'. Our Andres Iniesta Sheeko Carruur ah oo lagu daray faahfaahin aan la shaacin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay kartidiisa, laakiin wax yar ayaa ka fiirsaneysa Andres Iniesta Biography Story taas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer -Cun nololeed
Andrés Iniesta Lujánwas ayaa ku dhashay maalintii 11th May, 1984 oo ku taal tuulada Fuentealbilla, Spain oo uu dhalay aabihii, José Antonio Iniesta (Mongol) iyo hooyada, María Luján Iniesta (goolhayaha guriga).
Wuxuu ku dhashay nasiib wanaag iyo ilmo hodan ah. Waalid ahaan waalidkiis iyo nasiib u leeyihiin inay ka yimaadaan Magaalada cajiibka ah ee Albacete, Spain. Wuxuu ku koray degmada Albacete oo loo yaqaanay laba waxyaalood; boqolkiiba sare ee kuwa ku hadla afka Spanishka iyo khamriga wanaagsan.
Andres wuxuu lahaa wax kasta oo uu u baahan yahay oo wuxuu doonayay nolosha sida ilmo yar. Markaa, wuu ixtiraamay rabitaankiisa waalidiintiisa.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Hawlaha Hore
Wuxuu bilaabay inuu ciyaaro da'da 10 Albacete Balompié, oo ah koox maxalli ah oo ku taala gudaha Albacete.
Andres Iniesta Photo Childhood
Markii uu da'diisu ahayd 12, markii uu ciyaarayay tartanka, wuxuu soo jiitay indhaha kooxaha kubada cagta ee Spain. Waalidiinta Iniesta waxay xiriir la leeyihiin kooxda Barcelona ee Enrique Orizola.
Iyadoo la ogaaday in wiilkoodu uu hibada u siiyay, waxay ku qanciyeen Orizola inay tixgeliyaan Iniesta oo ku biiray Barcelona Youth Academy.
Wareysi dhowaan la yeeshay, aabaha Iniesta ayaa xusuusta xilliga la weydiistay .. "Sidee xusuustaa xilligii uu Andrés ku lahaa boorsadiisa iyo inuu u wareego Barcelona?" Sida laga soo xigtay isaga ..Waxay ahayd arrin aad u dheer oo uu sameeyay go'aanka kama dambaysta ah. Waxaan helnay dalabkii Barcelona ee Barcelona, ​​waxaana uu ku qasbanaa inuu tago La Masia, oo ah naadiga akadeemiga ah ee Barcelona, ​​madaama aan ka tageyno aagagii our Fuentealbilla. Ma uusan dooneynin inuu ka tago qoyska oo uu ii sheego si cad oo uusan u arkin inuu iska tagayo. Waxaan u sheegay isaga oo aan fursado noocaan ah aan marar badan imaanin, si uu u helo qaab wanaagsan oo akadeemiyadda ah ... Maalmo ka dib markii ay Andrés igu timid oo igu tidhi: "Aabahay, waxaan u socdaa Barcelona". Waan wareeray, markaa waxaan weydiiyay sababta uu u bedelay maskaxdiisa. Oo wuxuu ii sheegay wax dhab ah naxdin. Wuxuu yiri: "Waan socdaa, maxaa yeelay waxaad rabtaa inaad tagto, maxaa yeelay waa riyadaada". Laga soo bilaabo waqtigaas waxaan dhihi karaa waxaan wax badan ka ogaaday wiilkayga. Wuxuu wax badan iga baray markii uu ahaa 12 oo keliya.
Waxa uu u safray waalidiintiisa si uu u booqdo akadeemiyadda La Masia ee ciyaartoyda da'da yar, ka dibna waalidkiis ayaa go'aansaday inuu isku qoro akadeemiga. Ka dib sawirkiisa sawirkiisa, waalidiintiisii ​​ayaa guriga uga tagay. Tani waxay dhacday sanadka 1996.
FC Barcelona waxay ka dhisan tahay dhamaan ciyaartoydeeda oo ka soo jeeda magaaladooda iyagoo ka soo jeeda da '13 ama 14. Si kastaba ha ahaatee, Iniesta waxa uu ahaa kaliya 12, waxaana ay aheyd mid aan caadi aheyn in kooxda ay lasoo saxiixato qof da 'yar. Inkastoo ay diidmo ka soo horjeedaan, kooxda ayaa horay u soo qaadatay isaga oo qortay isaga oo kalsooni ku qabay inay aheyd mid ka mid ah go'aanadii ugu fiicnaa ee ay qaadan lahaayeen naftooda iyo ciyaaryahanka.
Andres Iniesta Oo Ku Biiraya Barcelona
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Bilowga Adagga
Iniesta da 'yar ayaa ku dhibtoonayay inuu ka fogaado waalidkiis
Iniesta ayaa yiri "Wuxuu ku dhawaaqay wabiyada" maalinta uu ka tagay La Masia oo ay ku dhibtoonayeen in ay kala tagaan waalidkiis. Waxa uu ahaa mid aad u xishood badan oo isku haya halka uu halkaa joogo.
Andres Iniesta Oo Ka Maqnaanaya Waalidkiisa
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Kacsanaanta Fikradda
Waxa uu kabtanka kooxda Barcelona ee 15 ku guuleystay koobkii Nike Premier League ee 1999, isagoo dhaliyay goolkii guusha daqiiqadii ugu danbeysay ee finalka, waxaana loo magacaabay ciyaaryahanka tartanka. Hoos waxaa ku qoran sawirka Guardiola oo soo bandhigay Iniesta, koobkiisa.
Young Andres Iniesta oo ka helay abaalmarin Pep Guardiola
Qaabkiisa, dheelitirkiisa iyo xirfadiisu waxay keentay in Spain ay ku guuleysato UEFA European Under-17 Championship 2001 iyo Koobka Under-19 sanadka soo socda.
Ka dib markii Iniesta yimid kooxda, ka dibna kabtan Pep Guardiola Xidigaan ayaa u sheegay ciyaaryahanka khadka dhexe ee khadka dhexe Xavi: "Waxaad dooneysaa inaad iga fariisato. Iniesta waxa uu doonayaa inuu naga dhigo dhamaanteen "
Kaliya wuxuu ku dhameystay tababarihii Guardiola ee ka tirsanaa xirfadiisii ​​sanadka 11 ee kooxdii ka socotay 1990 ilaa 2001.
Andres Iniesta Pep Guardiola in uu ka fariisto
Inta kale, sida ay sheegaan hadda waa taariikh.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
Andres Iniesta wuxuu ka soo jeedaa asal raaca qoyskiisa. A qoys Spanish caadi ah.
Mogul ganacsade ee aabihiis oo ka bilaabay xoqan. José Antonio Iniesta wuxuu bilaabay inuu noqdo shaqaale dhisme ka hor inta uusan laheyn hanti la wareegis ganacsi. Marka uusan shaqo lahayn, wuxuu u wareegay xeebta si uu u shaqeeyo garsoore.
Wuxuu marwalba ahaa kubad cagta ah oo dadaal badan sameeyay, sidaas darteed wiilkiisa Andrés ayaa rigoore u noqon kara kubada cagta.
José Antonio iyo Andres
Maalmihi hore ee uu ku sugnaa magaalada Fuentealbilla ee Spain ka hor inta uusan gaarin shirkii kubada cagta adduunka, José Antonio ayaa ku xigay wiilkiisa.
Andres Iniesta xiriirka adag ee aabihii, Jose
Waxaa la ogsoon yahay in uu ooyayo marka uu arko wiilkiisa oo xanuunsanaya ama dhaawacmay. Sida laga soo xigtay José Antonio Iniesta,
"Haa inbadan. Waxaan si fudud u ooyaa. Waan oohin karaa markii Andres uu xanuunsado ama uu arko isagoo xanuunsanaya isagoo og in wax aan sax ahayn. Intaa ka badan, waxaa jiray waqtiyo badan oo la oohin markii Andrés uu ka maqnaa guriga si uu xirfadiisa ciyaareed ugu soo bilowdo Barcelona. "
Iniesta ayaa weli ku jira ciyaartoy badan oo adduunka ah, inkastoo uu waqti u leeyahay ganacsiga qoyska.
José Antonio Iniesta iyo Wiilka, Andres Iniesta oo qabanaya Ganacsiga Qoyska
Haatan, José Antonio ayaa maamusha xafiiskii qoyska ee Bodegas Iniesta. Marka dadku waydiiso inuu wiilkiisa barbar dhigo khamri, ayuu yidhi "Waxay noqon lahayd khamri tayo wanaagsan, daacad ah oo qarsoodi ah."
Iniesta Sr. wuxuu sharxayaa sida wiilkiisa uu mar uun diirada u saaran yahay kubadiisa kubadda cagta, islamarkaana uu si fiican u ciyaarayo koox iyo wadan.
"Weligiis ma dooneynin inuu noqdo hogaamiyaha ama kabtanka wax walba,". ayuu yidhi. "Waxaa jira kabtanimo kuwaas oo ku guuleysanaya kaalintooda geesiyadooda iyo kuwa kale ee sidaas sameeya ayagoo hoos udhigaya, waxaa dooranaya saaxiibadooda. Wiilkayga Andres waa labadaba. "
HOOYO: María Luján sawirka hoose waa hooyada Andres Iniesta.
Andres Iniesta iyo hooyada, María Luján
María Luján ma ahan mid ka mid ah qof warbaahineed laakiin qof kale oo loo yaqaano inuu daawaday cayaar kasta oo uu wiilkeeda ciyaaray tan iyo bilowgii xirfadiisa.
KALSOON: Maribel Iniesta waa walaashii kaliya ee walaalkeed u dhashay Andres Iniesta. Waxay ku soo koray aagga meesha ganacsiga khamrigu wali soo kordhay. Waxay u egtahay iyada oo ka duwan iyada aabaheed.
Andres Iniesta walaashiis-Maribel Iniesta
Maribel wali waxay u xoqdaa xididadeeda iyada oo hadda ay maamusho shirkadda khamriga qoyska.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Andres Iniesta Love Story iyo noloshu waxay ku wareegsan tahay hal haween ah. Ma ahan mid ka mid ah quruxda, Anna Ortiz.
Andres Iniesta ee Sheekada Love with Anna Ortiz
Anna Ortiz waa Catalan ah iyo takhasus ku takhasustay sameynta xirfad, sawir sawir,
dharka timaha, qurxinta iyo caafimaadka, Waxay hadda ka shaqeysaa sidii naqshadaynta gudaha Coton et Bois.
Waxay la kulmeen wakhti wakhti Iniesta dhaawac uu ka soo gaadhay sanadka 2008. Waxa uu ku dhacay jacayl iyada oo ay u bixisay adeegyo caafimaad oo jimicsi oo jimicsi ah.
Bishii Sebtembar 2010 Andrés Iniesta ayaa xaqiijiyay in Anna ay uur leedahay cunugiisa. Waxay dhalatay Valeria Iniesta Ortiz. Hoos waxaa ku yaal sawirka Valeria waalidkeed.
Andres Iniesta, Anna Ortiz iyo gabadhiisa Valeria
Andres Iniesta iyo Anna Ortiz ka dib afar sano oo si farxad leh u wada joogeen ayaa go'aansaday in ay is guursadaan 2012. Guurku wuxuu ka dhacay galbeedka Tamarit oo u dhow Tarragona.
Magacyada caanka ah ee lagu soo bandhigay arooska ayaa ahaa Lionel Messi, iyo sidoo kale weeraryahankii hore ee Barcelona Samuel Eto'o.
Wax yar ka dib arooska ayaa shaaca ka qaaday wargeyska 3.9million ee Twitter-ka, isaga oo sawir ka qaaday sawir isaga iyo xaaskiisa iyo tweeting: 'Maalin yaab leh! Just is guursaday. '
Arooska Andres Iniesta ee sawirka
Andres Iniesta iyo xaaskiisa cusub ee Anna Ortiz waxay kufaraxday xeebta ku taala Cancun, Mexico. Halkaa, dhawaanahan cusub ayaa u muuqday mid aad u faraxsan oo raaxo leh markii ay sameeyeen inta badan cimilada qorraxda.
Andres Iniesta oo ku raaxeysanaya asxaabtiisa xaaskiisa
31st May, 2015, Andres iyo Anna waxay leeyihiin ilma labaad iyo ilmo labaad. Magaciisu waa Paolo Andrea Iniesta.
Andres Iniesta sawir buuxa oo qoyska ah
Andres Iniesta waa aabbe wanaagsan oo jecel inuu waqti tayo leh la qaato caruurta. Wuxuu mar walba isku dayaa inuu aduunka u sheego taas. Waa waalid dhab ah oo caruurtiisa ka sarreeya baahidiisa iyo rabitaankiisa.
Andres Iniesta - Aabbaha Daryeelaya
sida Radamel Falcao iyo Robert Lewandowski, Andres Iniesta ayaa ku noolaa nolol farxad leh.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Shirkadda Wine
Haa, maamulihii hore ee Premier League Sir Alex Ferguson iyo Harry Redknapp ayaa si wacan loogu yaqaan jacaylka khamriga, laakiin midkoodna kama uusan tegin beerta canabka ah ama winery.
Intaa waxaa dheer, ciyaartoyda kubadda cagta ee maanta ayaa u badan inay hantidooda ku dhejiyaan gawaarida isboortiga ama guryo muuqaal ah, marka loo eego wax walba oo ay ka mid yihiin kuwa loo yaqaan 'elective' sida beerashada canabka.
Laakiin waxaa laga yaabaa inuusan si fiican u yaqaan, sababtoo ah waxa uu ku qanacsan yahay aamusnaantiisa, waa Andres Iniesta, kaasoo waqtigiisa iyo lacagkiisa ku galay wax soo saarka khamriga.
Andres Iniesta - Khabiirka soo saarka Wine
Inta lagu guda jiro arooskiisa, wuxuu soo booqday dhammaan dadkii booqdey khamriga Iniesta ee lagu magacaabo gabadhiisa Valeria.
Waa ganacsi qoyska ah isaga. Haddii aad ku nooshahay Spain waxaad sidoo kale arki kartaa wejigiisa oo ka soo baxa xayeesiinta kor u qaadaya xawaashka ka yimaada ganacsigiisa, Bodega Iniesta. Tani waa ganacsi weyn oo dhammaan qoyska ayaa ku lug leh.
Qoyska ayaa horey u lahaa ganacsigii ka hor inta uusan noqon ciyaaryahankii kubada cagta guuleystay, islamarkaana uu koray wuxuu sidoo kale ka qeyb qaadanayay ballaarinta.
Xaqiiqdii, Iniesta waa jiilka seddexaad ee qoyskiisa si uu door uga qaato ganacsiga khamriga, taas oo ay aasaaseen awoowe Jose Antonio.
Guud ahaan, qoyskiisu wuxuu ka badan yahay 180 hektar oo beero canab ah, oo dhammaan khamriga ayaa laga sameeyey miraha gaarka ah.
Ganacsigu wuxuu ku yaal Albacete, taas oo ah laba saacadood oo ay ka socoto Valencia, iyo laba saacadood iyo badh Madrid, oo ah suuq weyn. Shirkaddiisu waxay shaqaaleysiisaa 35 dadka, 25 ee winery, iyo 10 waqti buuxa beeraha canab ah oo khudradda khamriga khaas ah laga goosto.
Andres Iniesta Khudbadda miraha
Xilliga qorista, shirkaddiisa waxay iibisaa khamri la magac baxay gabadhiisa Valeria, iyo mid kale oo ka dambeeya wiilkiisa Paolo Andrea.
Wuxuu sidoo kale soo bandhigay khamri kale oo la yiraahdo "116" oo xusuusta daqiiqadii ciyaarta markii uu goolka guusha ka dhaliyay final-ka 2010.
Guud ahaan, 1 ilaa 1.2 malaayiin khamri oo khamri ah ayaa laga soo saaraa shirkaddiisa sannadkii. Khamiiskiisa waxaa laga heli karaa dalalka 33, oo ay ku jiraan Bariga Aasiya, koonfurta, dhexe iyo waqooyiga Ameerika, iyo galbeedka iyo bariga Yurub. In UK waxay ku iibiyaan £ 6.50 ilaa £ 17.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Wuxuu ahaan jiray Madrid Fan
Sida taageere kasta oo da 'yar oo kubada cagta ah, Andres Iniesta wuxuu taageeray naadigiisa, Albacete iyo Barcelona ayaa ahaa midkii ugu dhawaa sababtoo ah wuxuu si dhab ah u caabudi jiray Michael Laudrup. Markii uu lix jirsaday, kooxda reer Catalans ayaa ka adkaaday kooxda uu jecel yahay ee 7-1, waxaana uu ka soo horjeeday kooxdooda oo ay ku qanacsan yihiin inay ku qanciyaan inay ku kalsoonaadaan Real Madrid.
Isbedelka ku yimid kubada cagta ayaa abaalmarin la siiyay markii Laudrup uu u soo dhaqaaqay Real Madrid 1994. Sida hore loo soo sheegay, waxa uu ahaa aabihiis oo ka dhigay inuu ku biiro FC Barcelona.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Heer sare
Xilliga qorista, Andres Iniesta shaki kuma jiro inuu yahay ciyaaryahanka ugu ixtiraamka badan Spain. Khamiiskiisu si aad ah ayuu ugu iibiyaa Madrid, oo ah guriga uu ka dhexjiray.
In Catalonia waxaa loo caleemo saaran yahay kabtanka Barcelona, ​​iyo inta kale ee Spain waa la ixtiraamo sida uu ku guuleystay Koobka Adduunka ee Spain.
Sidoo kale, isagu waa nin caadi ah oo reer Isbaanish ah, oo dadku jecel yihiin. Ma uusan ku lug laheyn muran siyaasadeed, taas oo qaar ka mid ah ciyaartoyda kale ee Barcelona ama Real Madrid ay sameeyaan.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Marna marna ma uusan dooneynin FC Barcelona
Xiddiga Barcelona Andres Iniesta ayaa si fantastik ah u shaaciyay inuusan markii hore dooneynin inuu ku biiro kooxda reer Catalan isagoo da'yar ah, sababtoo ah wuxuu ku biiray kooxda reer Spain. Wuxuu doonayaa tartan cusub, oo ah raadin ah inuu u guuro meel fog fog.
Erayadiisa, "Ma aanan dooneynin inaan yimaado, sababtoo ah waxaan u tixgeliyey inaan qoyskeyga la ahay iyaga. Waxaan u baahday inaan meel aado meel aan fogeyn iyaga oo aan lahayn, " Iniesta ayaa sidaas yiri BeIN SPORTS.
Qoraalka toddobaadyadii oo la hadlay aabahayga ayaa ka dhigay inuu soo jeediyo.
Iniesta ayaa sii waday ..."Aabaheygu kalsooni badan baan leeyahay, wax badan oo iila mid ah waan ogahay marka uu ii sheegayo waxyaabo, caadi ahaan wuu ku guulaystaa. Waan ixtiraamaa aabahay anigana waan ogaa inaan ku qasbanahay in aan iska qaado. Ka dib markii aan go'aansaday inaan u ciyaaro FC Barcelona, ​​waxaan arkay bilihii ugu xumaa nolosheyda qof ahaan, laakiin caawimadeyda qof walba, maalinba maalinta ka dambeysa, aad ayay u fiicneyd. "
Wali ma baahna in la yiraahdo, Iniesta go'aankiisii ​​hore ee cabsi ayaa si fiican u shaqeeyay.
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'Dad badan oo magaciisa ah
Iniesta wuxuu leeyahay tiro naaneys ah. Saxaafada Isgaadhsiintu waxay inta badan ku tilmaamaan sida Don Andres halka qaar qaar u yeedhaan El Ilingista (Illusionist) sababtoo ah awoodiisa iyo rabitaankiisa inuu ka ciyaaro boos kasta oo garoonka ah.
Qaar kale ayaa ugu yeeray El Cerebro (The Brain) sababtoo ah sirdoonkiisa kubada cagta ee aan fiicneyn.
Qeyb ka mid ah Galacticos ee Real Madrid, ayaa hoos udhacay Iniesta sidoo kale waxaa lagu cadeeyay El Anti-Galactico.
Ugu dambeyntii, Iniesta qaab ciyaareedkiisa ayaa sidoo kale ku guuleystay naaneesta (The Pale Knight).
Andres Iniesta Sheeko dhalinyaro sheeko xeel dheer-Markaad Isticmaalayso Xogta IG
Andrés Iniesta wuxuu isticmaalaa Instagram sida qofkasta oo kale. "Waxaan ahay aabe jecel inuu sawirro sawirada carruurtiisa, cuntada nuugay, iyo dhismayaasha xiisaha leh" ayuu qoray wargayska dhexe ee dhowaan.
Maalin maalmaha ka mid ah, Iniesta ayaa si lama filaan ah u ogaaday in xisaabteeda la hakiyay, Instagram isaga oo sheegay inuu si qalad ah u jebiyey shuruudaha shirkadda ee adeegga qoyska, cuntada, iyo sawirrada dhismaha.
Iniesta wuxuu helay in yar oo qariib ah, xaaladdana waxa kaliya oo uu helay wax badan oo ku saabsan markii uu joogay Instagram, iyadoo aan digniin lagu laheyn, bedelay Andrés Iniesta.
Iniesta ayaa isku dayay inuu dhowr jeer ku soo biiro Instagram isaga oo aan wax jawaab ah ka helin shirkadda, xitaa ka dib markii uu sawirkiisa ka lumay magaciisa magaciisa ayaa loo dhiibay qof kale.
Hase yeeshee, Instagram waxa uu sameeyay wax sax ah, soo celinta akoonkiisa Iniesta, wuxuuna ku qasbayay xiddiga kubadda cagta in uu u gudbiyo mid kale oo magac yar oo macquul ah.
Hadal qoraal ah oo la siiyo dhowna la, Instagram ma faahfaahin doono sida wax u eg sida tan ay u suuro gashay inay si dhakhso ah u dhacdo iyo iyada oo aan wax sabab ah oo macquul ah ama macquul ah.
"Waxaan halkan qalad ku sameynay oo aan dib u soo celiyay koontada sida ugu dhaqsiyaha badan ee aan u ogaano," ayuu yiri shirkadda. "Raaliyahayaga ayaa u soo baxaya Mr. Iniesta sababtoo ah dhibaatadii aan u geysanay isaga."
Dani Carvajal Sheeko Xeel dheer oo Xogta Lahaa Xogta Lahaanshaha